यस्तो छ हिन्दु धर्मको परिभाषा ! - NepalKhoj
यस्तो छ हिन्दु धर्मको परिभाषा !
नेपालखोज २०७८ साउन ७ गते ५:००
१. एक जंगल जहाँ विभिन्न प्रकारका रूखहरू, बोटबिरुवा, विभिन्न प्रकारका फूलहरू, विभिन्न प्रजातिका पशुहरू, चराहरू, आदि नदीहरू, तालहरू, पोखरीहरू, पहाडहरू र कैयौं बाटाहरू बीचमा छन् जुन फरक र अनौंठो छ । त्यहाँ तपाई कुनै पनि मार्गबाट जंगलबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ । तपाईंसँग भड्कने पूर्ण स्वतन्त्रता छ ।
२. अर्को छेउमा चिडियाखाना छ, जहाँ त्यहाँ केवल खास प्रकारका रूखहरू र बोटबिरुवाहरू छन् र सबै प्रकारका जनावरहरू र चराचुरु पिँजडामा राखिएका हुन्छ । त्यहाँ नदी र पर्वत छैन । नक्कली झरनाहरू सिर्जना गरिएको छ । यो एक साँघुरो सडक हो । यसमा हिँडिसकेपछि सबैले दोस्रो प्रवेशद्वारबाट बाहिर निस्कनु नै पर्छ ।
३. त्यहाँ एउटा सुन्दर बगैंचा छ । त्यस बगैंचामा विभिन्न रूखहरू, बोटबिरुवा र फूलहरू लगाइएको छ । त्यहाँ एक सानो पोखरी र एक नक्कली झरना छ । त्यहाँ कुनै जनावर वा पशुहरू छैनन्, तर पक्कै चराहरू छन् । यहाँ एक साँघुरो सडक हुन्छ । यसमा हिँडिसकेपछि सबैले दोस्रो प्रवेशद्वारबाट बाहिर निस्कनुपर्छ ।
अब सोच्नुहोस् तपाई कहाँ यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ रु वास्तवमा, हिन्दु धर्म भनेको त्यो जंगल जस्तै हो जहाँ सबै चिज तपाईंका लागि हुन्छ र जहाँ तपाईं घुम्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । तपाईं कुनै पनि मार्गबाट आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ । भिन्नता र फरक जीवनको महत्त्वपूर्ण रहस्य र साहसिक हो । जीवनमा सबै प्रकारका रंगहरू हुनुपर्दछ । अब हामी हेरौं कि हिन्दु धर्मको शक्ति के हो ।
क. ध्यान र योग
हिन्दु धर्ममा, जागरण, ज्ञान, योग, प्रशंसा, ध्यान, तपस्या, जप, संकल्प र समर्पण, यी नौ महान् मानिन्छ । केवल यो अनुसरण गरेर तपाईं सिद्धि वा मोक्ष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईं सिद्धि वा मोक्षमा रुचि राख्नुहुन्न भने, यसका माध्यमबाट तपाईं स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ र तपाईं जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
ख. रहस्य र साहस
हिन्दु धर्ममा रहस्यलाई महत्त्व दिइन्छ । यदि जीवनमा कुनै रहस्य छैन भने, त्यहाँ उत्साह र हुने छैन । यसैले हिन्दु धर्म रहस्यमय धर्म हो । जीवन, आत्मा, पुनर्जन्म, भगवान् र यो ब्रह्माण्ड एक रहस्य हो । यो रहस्य थाहा पाउँदाको परापूर्वकालदेखि नै मानिसमा रहेको छ । यस रहस्यलाई जान्न कुनै चासो नभएको मानिस जनावर जत्तिकै हो । हिन्दु धर्मको मान्यता छ कि मानिस आफैंलाई चिन्न जन्मिएको हो ।
ग. स्व-अनुशासन र स्वतन्त्रता
हिन्दु धर्ममा स्व-अनुशासनलाई ठूलो महत्त्व दिइन्छ । तपाईं र अरुको स्वतन्त्रता कायम गर्न र धर्म, देश र समाजलाई व्यवस्थित राख्नु आवश्यक छ । यदि देशका नागरिकहरू बीचमा कुनै स्व-अनुशासन छैन भने, यो देश होइन तर भिड हो, जुन कुनै पनि समय कुनै पनि व्यक्तिले चलाउन सक्दछ ।
हिन्दु धर्मले ’व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ लाई महत्त्व दिन्छ, जबकि अन्य धर्महरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । हिन्दु धर्मको मान्यता छ कि व्यक्तिको आत्मा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको माध्यमबाट मात्र विकास हुन्छ । यो कारण हो कि हजारौं वैज्ञानिकहरू हिन्दुहरूमा,त्यहाँ समाज सुधारक र दार्शनिकहरू थिए जसले धर्मलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याए । तर यदि यस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भइरहेको छ वा अरुको स्वतन्त्रताको हनन् भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय दिनु आवश्यक छ । यसैले स्व-अनुशासन, सह-अस्तित्व र स्वीकृतिमा जोड दिइन्छ ।
४. तत्त्व ज्ञान र दर्शन
हिन्दु धर्ममा के छ भनेर जान्न धर्मको सार जान्नु आवश्यक छ । तत्व ज्ञानले हामीलाई भगवान्, आत्मा, ब्रह्माण्ड, पुनर्जन्म र कर्मको सिद्धान्तको बारेमा सही जानकारी दिई हाम्रो सोचाइ विकास गर्दछ । वेदमा तत्त्वहरूको ज्ञानको बारेमा कुरा गरिएको छ । वेदबाहेक, उपनिषद र गीता तत्त्वहरूको ज्ञानको बारेमा बताइएको छ । माथिका तीनवटा हिन्दु धर्मका शास्त्रहरू हुन् । तत्त्व ज्ञान दर्शनको एक अंश हो । वेद र उपनिषद् पढिसकेपछि मात्र ती साधुहरूले उनीहरूको दर्शनको रचना गरेका छन् ।
५. संस्कार तथा कर्तव्य
हिन्दु धर्मले मानिसहरूको प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक कानुनमा बाध्य पारेको छ । यो नियम सभ्य समाजको चिनारी हो । यसका लागि, मुख्य कर्तव्यहरू वर्णन गरिएको छ, जुन जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउन सकिन्छ । जस्तै १. संध्यावन्दन (वैदिक प्रार्थना र ध्यान), २. तीर्थ (चारधाम), ३ दान (खाना, कपडा र पैसा), माथिका सबै कार्यहरूले अनुशासन र जीवनमा सद्‌भाव विकास गर्दछ । यसले जीवनलाई सफल, स्वस्थ, शान्तिपूर्ण र समृद्ध बनाउँछ, त्यसैले हिन्दु धर्मले बाँच्नको कला सिकाउँछ ।
६. प्रकृति निकटता
हिन्दु धर्म प्रायः प्रकृति उपासकहरूको धर्म हो भनेर आलोचना गरिन्छ । भगवान्‌बाहेक ग्रहहरू र नक्षत्रहरूको पूजा गरिन्छ । यो मूर्खता हो । वास्तवमा, हिन्दुहरू काँकर-कणकरमा शंकर छ भनेर विश्वास गर्छन् अर्थात् भगवान् हरेक कणमा हुनुहुन्छ । यसको मतलब यो होइन कि हरेक कणको पूजा गर्नुपर्छ ।
यसको मतलब हरेक कणमा जीवन छ । रूखहरू सास फेर्छन् । वास्तवमा, के देखिन्छ त्यो नै पहिलो सत्य हो । प्रत्येक व्यक्ति त्यस झिम्काउने तारासँग जोडिएको छ जुन करोडौं मइल टाढा देखिन्छ किनकि यो उसलाई दृश्यात्मक छ । दृश्यको मतलब यसको प्रकाश तपाईको आँखामा पुग्न सक्छ ।
७. चाडपर्वलाई महत्त्व
हिन्दु धर्मले चाडपर्वलाई महत्त्व दिन्छ । जीवनमा उत्साह र उत्सव हुनु महत्त्वपूर्ण छ । परमेश्वरले मानिसलाई स्वतन्त्रतासाथ हाँस्न, मनाउन, रमाइलो गर्न र खेल्न सक्ने क्षमता दिनुभएको छ । यही कारण हो कि सबै हिन्दु चाडपर्व र संस्कारहरू नृत्य, संगीत र खानालाई राम्रो सन्तुलनमा राख्दै सन्तुलित र सुसंस्कृत ढंगले समावेश गरिएको छ । उत्सव ले जीवनमा सकारात्मकता, मिलनसार र अनुभवहरूको विस्तार ल्याउँछ । तत्व ज्ञान र दर्शन हिन्दु धर्मको सबभन्दा ठूलो शक्ति हो जसमा पूरा धर्म खडा हुन्छ ।
मंगल चौथी !
शिवको प्रिय महिना साउन, तर किन ?
सूर्यदेवको उपवास किन बस्ने ?
गुरुपूर्णिमाको महत्त्व, किन पुज्ने गुरु ? (भिडियो)
आज शिक्षा दिने गुरुजनप्रति सम्मान प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा मनाइँदै
शनिबारको व्रत, पूजा, विधि र कथा